परम्परागत मान्यताका पछाडि लुकेका छन् रहस्य थाहा पाउनुहोस् वैज्ञानिक कारण · Aawaj Nepal
परम्परागत मान्यताका पछाडि लुकेका छन् रहस्य थाहा पाउनुहोस् वैज्ञानिक कारण
आवाज नेपाल, २०७५ असार २८ बिहीबार
‘राती कुचो लगाउनु हुन्न है ।’ बाबुबाजेले यसरी सर्तक गराउँदा हामी ठान्छौं, बुढाको आडम्बरी कुरा । उहाँहरु सर्तक गराउनुहुन्छ, ‘फुटेको ऐना हेर्नु हुँदैन ।’ हामी यस्ता भनाईमा ढोंग वा अन्धविश्वास देख्छौं । ‘सन्को भाँच्दै बस्नु हुँदैन’ बुढाहरुले सजग गराउँदा हामी त्यसलाई कतिपनि पत्याउँदैनौ ।
तर, हाम्रा पितापूर्खाको मनगडन्ते कुरा हुन् यी ? अन्धविश्वास हुन् ? आडम्बर हुन् ?
सोचौं त, किन उनीहरुले यसो भने होलान् । विज्ञान र प्रविधिको युगमा बाँचिरहेका हामीलाई बुढाहरुको यस्तो कुरा वाहियात लाग्छ । हामी ठान्छौं, ‘बुढाहरुलाई केही थाहा छैन । अन्धविश्वासका कुरा गर्छन् ।’ यद्यपी हामीले कहिल्यै मनन गरेका छौं ? उनीहरुले किन यसो भने । यसको पछाडि केही कारण पो होला कि ?
वास्तवमा हाम्रा पिता पूर्खाले जुन प्रचलन स्थापित गर्न खोजे, त्यसको पछाडि ढोंग वा भ्रम छैन । बरु वैज्ञानिक कारण छ । उनीहरुले त्यसै यस्ता कुराहरु भनेनन्, जो हाम्रो व्यवहारिक जीवनका लागि उपयोगी छैन ।
रुढिवादी होइन, वैज्ञानिक
हाम्रो समाजमा त्यस्ता धेरै धार्मिक मान्यता प्रचलित छन्, जसपछाडिको मूल कारण धर्मभन्दा बाहिरको छ तापनि तिनलाई समाजले धर्मकै नाममा स्थापित वा प्रचलित गरेको छ । देश, काल एवं परिस्थितिगत व्यवस्था तथा सामाजिक कल्याणका उद्देश्यले प्रचलित त्यस्ता मान्यतालाई आजको सन्दर्भमा वैज्ञानिकताको कसौटीमा राखेर हेर्नु आवश्यक छ ।
आजको तार्किक पुस्तालाई धर्मप्रति विश्वास जगाउन तथा पुराना चालचलन जति सबै रुढिवादी हुन् र ती त्याज्य छन् भन्ने भ्रम हटाएर व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याणको माध्यम बनाउनु आवश्यक छ ।
यहाँ त्यस्ता केही सामाजिक मान्यताहरुको चर्चा गरिएको छ जसलाई स्थापना त धर्मको नाममा गरियो तर तीमध्ये अधिकांशको मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण नै थियो । यसैगरी कतिपय मान्यता पौराणिक आदर्शको अनुकरणका कारण समेत भएको पाइन्छ ।
साँझमा नबढार्नु, सिसा फुट्नु, फुटेको ऐना नहर्नु, सुन हराउनु, गर्भवती महिलाले खोलो तर्नु, दैलोमा नबस्नु, गोडा खापेर नबस्नु आदि कुराका पछाडि यही रहस्यले काम गरेको छ । हेरौँ केही मान्यता र ती पछाडिको कारणस्
राती किन नबढार्नु ?
साँझ तथा रातको समयमा कुचो लगाउनु अशुभ मानिन्छ । आजसम्म पनि कतिपय घरमा यो प्रचलनलाई दृढतापूर्वक पालन गरिन्छ । यसपछाडिको धार्मिक मान्यता के छ भने राति कुचो लगाउँदा लक्ष्मी अर्थात् सम्पन्नताबाट टाढा भइन्छ । यसको वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक पक्ष केलाउँदा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने प्राचीन समयमा बिजुली बत्तीको व्यवस्था थिएन । टुकी, दियालो, लालटिन आदि बाल्दा अहिलेको जस्तो पर्याप्त उज्यालो आउँदैनथ्यो ।
मधुरो प्रकाशमा बढार्दा यदाकदा घरबाट महत्वपूर्ण वस्तु हराउने सम्भावना रहन्थ्यो । फोहोरसँगै मूल्यवान् सामान हराउनसक्ने सम्भावनामाथि विचार गरी बढार्न नै रोक लगाइयो । मूल्यवान् वस्तु लक्ष्मी अर्थात् सम्पन्नता प्रदान गर्ने वस्तु भएकाले राती बढार्दा लक्ष्मीले छाड्छिन् भनेर धार्मिकताको जलप लगाई बढार्न रोक लगाइयो ।
सिसा फुट्नुलाई पनि अशुभ मानिन्छ । यसका पछाडि लुकेको वास्तविक कारण केलाउँदा के देखिन्छ भने यो मानिसको कुशलतासँग जोडिएको छ ।
सिसा फुटेर भुइँमा छरिएपछि त्यसका मसिना कण जतिसुकै सफा गरे पनि भुइँमै टाँसिएर रहनसक्छन् । यसबाट परिवार तथा आगन्तुक व्यक्तिलाई त्यो कण बिझ्ने डर भइरहन्छ । खासमा पहिलेका घरहरुमा अहिलेको जस्तो ढलान, टायल, मार्बल आदिको चलन थिएन, भुइँमा माटो अथवा गोबरले लिपिएको हुन्थ्यो जसमा सिसाका कण सजिलैसँग टाँसिएर रहनसक्थे ।
त्यसले ठूलै समस्या निम्त्याउनसक्ने भएकाले धर्मको डर देखाएर सिसा फुट्यो भने अलच्छिन लाग्छ भन्दै मानिसलाई सचेत तुल्याउने काम गरिएको देखिन्छ । तसर्थ मानिसहरु सावधान रहून् र चोटपटक लाग्नबाट जोगियून् भन्ने मान्यताका साथ यसलाई अशुभ मानिएको हो भन्न सकिन्छ ।
हाम्रो समाजमा सुन हराउनुलाई आज पनि अत्यन्त अशुभ मानिन्छ । सुनमा लक्ष्मीको वास हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तसर्थ सुन हराएपछि लक्ष्मीले छाडेर जान्छिन् भनेर विश्वास गरिन्छ । वास्तवमा सुन सर्वकालीन बहुमूल्य धातु हो ।
यो आकर्षक धातु मात्र नभई सम्पन्नताको प्रतीक समेत हो । आर्थिक संकट परेका बेला सुनलाई प्रयोगमा ल्याएर संकट निवारण गर्न सकिन्छ । पैसाको आखिरी परेका समयमा सुन छ भने सजिलै बन्धकी राखेर पैसा निकाल्न सकिन्छ ।
यस्तो बहुमूल्य धातु हराउनु निश्चय पनि ठूलो आर्थिक हानि हो । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सुनलाई संरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सुन हराउनु अशुभ हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यताको विकास गराएको बुझिन्छ ।
धार्मिक मान्यताको कुरा गर्दा जुठोसुतकलाई भुल्न मिल्दैन । घरमा कसैको मृत्यु हुँदा जुठो तथा जन्म हुँदा सुतक बार्ने प्रचलन छ । जुठोसुतक बार्नुका पछाडि विशेष रुपले स्वच्छता एवं संक्रमणबाट जोगिने उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।
गर्भवतीले नदी पार गर्नु
गर्भवतीले नदी पार गर्नु अशुभ मानिएको छ । यसका पछाडि सुरक्षा चासो जोडिएको पाइन्छ । प्राचीन समयमा साँघु, पुल आदिको व्यवस्था थिएन तसर्थ उतिबेला हिँडेर, पौडेर वा डुंगा आदिमा बसेर नदी पार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो जसबाट दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्थ्यो । महिलाका लागि संवेलनशील यो अवस्थामा जोखिम मोल्दा आमा तथा शिशु दुवैको ज्यान खतरामा पथ्र्यो । त्यसबाट जोगिन वा गर्भवतीको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी गर्भवतीले खोला तर्नुहुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता स्थापित गरिएको पाइन्छ ।
घरको दैलो वा ढोकाको संघारमा बस्नुलाई अशुभ मानिन्छ । यसो गर्नाले आयु क्षीण हुन्छ भनिन्छ । यसका पछाडि अन्य ठोस कारण भन्दा पनि पौराणिक मिथकलाई आधार बनाइएको पाइन्छ । भगवान् विष्णुले नृसिंह अवतार लिई हिरण्यकशिपुको वध गर्दा उसलाई दैलोमा राखेर काखमा लिई नंग्राले छाती चिरेर मारिएको थियो । यसैलाई आधार बनाएर दैलोमा बस्नु हुँदैन भनिएको देखिन्छ ।
उपरखुट्टी लगाएर सुत्नु
उपरखुट्टी लगाएर सुत्दा पनि आयु क्षीण हुने सामाजिक मान्यता छ । यसका पछाडि पनि पौराणिक सन्दर्भ गाँसिएको देखिन्छ । कथाअनुसार भगवान् कृष्णको गोडामा मणि थियो जुन सदैव चम्किरहन्थ्यो । एक दिन कृष्ण जंगलछेउको चौरमा उपरखुट्टी लगाएर सुतिरहेका बेला सिकार खेल्न आएको व्याधाले टाढाबाट देख्यो ।
उसले चम्किरहेको वस्तु हरिणको आँखा होला भन्ने ठानेर निशाना साध्यो । व्याधाले हानेको वाण आएर कृष्णको गोडा छेड्यो । यसैलाई कारण बनाएर कृष्ण गोलोकधाम गए । यसैलाई आधार बनाएर के भन्न थालियो भने उपरखुट्टी लगाएर सुत्यो भने आयु घट्छ ।